Mkpụrụ vaịn kachasị mma ghọtara site n'aka ndị ọrụ ubi - Ubi ahụ - 2019
Kasị mma mkpụrụ vaịn
Mkpụrụ vaịn - Osisi oge ochie nke bara uru ma nwee obi uto nye mmadu.
Ndị ọkà mmụta ihe ochie bụ ndị chọpụtara na mkpụrụ osisi vaịn, nke dị afọ 60, kwadoro nke a.
Ụmụ mmadụ na-enwe ekele maka okike maka onyinye a nke ụwa na anyanwụ, n'ihi na a pụrụ idepụta mkpụrụ osisi mkpụrụ vaịn na-enweghị atụ.
Ọ dịghị ihe ọzọ kwesịrị ekwesị karịa ọdịdị mmadụ karịa mkpụrụ nke osisi a, nke nwere ihe karịrị otu narị ihe na-arụ ọrụ na mmiri. Akuku nke mkpụrụ vaịn bara uru: tomato, mkpụrụ, epupụta, mgbọrọgwụ.
Ngwurugwu - ọrụ ekele. Mkpụrụ vaịn adịghị achọ na ala, na-anabata enweghị mmiri na obere okpomọkụ.
Onye na-akọ ubi ga-echere ogologo oge maka mkpụrụ osisi ahụ, n'ihi na mkpụrụ vaịn na-amalite ịmịpụta mkpụrụ n'oge ma mee ka ha nwee obi ụtọ na nnukwu mkpụrụ. Na mba ndị na-azụlite mkpụrụ vaịn n'ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, a na-etolite ihe karịrị anụ 8,000.
Ụdị mkpụrụ vaịn ndị ọhụrụ, nke ndị na-azụlite na afọ gara aga, na weebụsaịtị anyị.
Atụmatụ nlekọta na-agụ ebe a.
Ezi nlekọta maka udara mgbụsị akwụkwọ: //rusfermer.net/sad/plodoviy/posadka-sada/poleznye-svojstva-vishni-a-takzhe-posadka-i-uhod-za-kulturoj.html
Na mgbakwunye na teknuzu iche nke mkpụrụ vaịn mkpụrụ vaịn, e nwere tebụl iche
White mkpụrụ vaịn
Chardonnay - Eze ọcha iche hails si Burgundy. Ọ na-eto gburugburu ụwa, na-aga ịkwadebe mmanya na-acha ọcha mmanya na champeenu. Nke a bụ osisi na-adịghị mma na mmalite oge. Mmiri na-ekpo ọkụ dị ya mma. Ibu arọ nke ụyọkọ nke ogwu tomato na-acha akwụkwọ ndụ na-acha bụ 115 gr.
Rieslingiche iche dị iche iche, dị ka akụ dị na Germany. Ụyọkọ na-erikpu 90 grams, nke na-agụnye odo odo-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ntụpọ aja aja, nwere ọdịdị conical.
Ụdị mkpụrụ vaịn na-emetụta ụdị dị iche iche. Ezi megide ọrịa ndị ọzọ.
Aligote - otu n'ime osisi kachasị mma na Ukraine, na-etozi ebe ahụ n'etiti etiti Septemba. Ụyọkọ dị kilogram 103 grams na-acha odo odo-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na anụ ahụ dị nro.
Aligote dị mfe ịmata site na epupụta na petioles na ụcha ọbara uhie. N'ebe mmiri dị elu na-adaba na ire ere.
A na-esi na Europe nweta mkpụrụ vaịn ndị a na-acha ọcha, ha maara nke ọma ma ghọọ ụmụ amaala. E nwere ezigbo mkpụrụ vaịn na-acha ọcha nke sitere na mpaghara, nke ka mma maka ọnọdụ ihu igwe nke ala nna.
Rkatsiteli - Kakheti dịgasị iche iche. Unpretentious, na-egosi oke ntu oyi eguzogide na undemanding na ala. Oke oke ụyọkọ arọ - 390 g. Berry dị nnọọ mma, a bit tart uto. Ihe dị iche iche nke Rkatsiteli bụ ntụpọ ọbara ọbara.
Maka ubi-vine na-abụghị nke na-emepụta, a na-ahọrọ ụdị tebụl iji rie mkpụrụ vaịn ọhụrụ maka nri dị ka o kwere mee.
Saba Saa - okpokoro dị iche iche, ripening n'etiti ufọt ufọt August. Mkpụrụ ụyọkọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-erule 117 grams, nke nwere nnukwu mkpụrụ osisi ndị nwere nsị nutmeg. Winter-hardy Pearl Saba dị oké ọnụ ahịa maka mmalite na uto dị mma.
Arcadia - nnọọ n'oge dị iche iche. Ụyọkọ na-eru ihe ruru 2 kilogram nke nnukwu tomato na ekpomeekpo nutmeg. Ọdịiche dị iche iche. Ọ na-eguzogide ọgwụ na ọrịa, na-anabata oghere oyi
Tabriz - Azerbaijani ọkara n'oge okpokoro dịgasị iche iche. Ụyọkọ conic na nnukwu ìhè green tomato. Ụdị dịgasị iche iche dị mma. Ihe na-adịghị mma na-agụnye inwe mmetụta uche na obere okpomọkụ.
Banyere uru nke piich toro n'ubi ha, gụọ anyị.
Kedu otu esi eme mkpuchi? Ihe anyị ga-enyere aka: //rusfermer.net/postrojki/sadovye-postrojki/dekorativnye-sooruzheniya/tehnologiya-vozvedeniya-navesa-iz-polikarbonata-svoimi-rukami.html
Cabernet - ọkwa kachasị mma maka mmepụta mmanya. Ripens mbubreyo. Ụyọkọ ahụ bụ obere, friable, nke gụnyere obere tomato. Herbal uto na Solanaceae.
Ọdịiche dị iche iche na-anabata oyi oyi, na-eguzogide phylloxera.
Merlot - ọtụtụ dịgasị iche iche a maara na mmanya. Black tomato na a waxy oge ntoju na flavored solanaceous. Winter-hardy, na ezi mkpụrụ. Ọ na-eme ka ire ntụ na-acha ntụ
Ụtọ n'anya - Ụdị ụyọkọ dị iche iche nwere ike ịdị kilogram 2 n'arọ. Berries na nnukwu akpụkpọ anụ nke ọchịchịrị-acha anụnụ anụnụ. Na-enye ezigbo mkpụrụ. Iguzogide oria na ntu oyi emeela ihe di iche iche di iche iche.
Codrean - dị iche iche dị iche iche. Ibu arọ nke ụyọkọ nwere ike iru ruo 1.5 n'arọ. Na tomato dị ukwuu, na-atọ ụtọ uto. Ụdị dịgasị iche iche bụ ọrịa na ntu oyi na-eguzogide ọgwụ.
Kishmish - nke ochie dị iche iche, bred na Central Asia. Na usoro nke ripening na-ezo aka na-ajụ-n'isi. Nnọọ ụtọ tomato nke nwa agba na aka nke waks, na-enweghị osisi.
Ụyọkọ nke ịdị arọ dị arọ nke ọdịdị ígwè. Enweghị ndidi na-adịghị mma.
Mgbụsị akwụkwọ mkpụrụ vaịn n'oge mgbụsị akwụkwọ - ọkara n'oge dịgasị iche iche, dị iche iche site na uto dị mma. Ụyọkọ mkpụrụ osisi na-atụle gram 700 gụnyere nnukwu tomato. Ọdịdị dịgasị iche iche dị elu.
Uru ọzọ bụ njem dị mma, nke na-enye gị ohere ịnọgide na-ahụ mma nke tomato. Ma na mgbanwe nke okpomọkụ, ụdị akpụkpọ ụkwụ nwere ike imetụta ụdị dịgasị iche iche.
Goma - French mmanya-eto eto dịgasị iche iche nke na-ajụ ripening. Ụyọkọ ahụ bụ obere ma dị oke. Na-atụgharị uche site na ntụ ntụ
Grenache - Spanish oge ochie-ripening mmanya dịgasị iche iche, dị nnọọ arụpụta na unpretentious na ala. Ụyọkọ ndị buru ibu na obere tomato.
Na mgbakwunye na nke ochie na-eto eto iche iche si n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Europe, e nwere ọtụtụ ngwakọ ụdị okpokoro-acha ọbara ọbara mkpụrụ vaịn bred anyị breeders.
Victoria - Akpokoro okpokoro dịgasị iche iche, dị nnọọ n'oge. Na ihu igwe ọkụ ọ na-eto n'ime 100 ụbọchị. Mkpụrụ ụyọkọ buru ibu rute oke nke 2 n'arọ. Berry na flavor nutmeg. Ụdị dịgasị iche iche nwere ezigbo nguzogide ọrịa, nwere ike ịnagide okpomọkụ ruo ogo 27.
Maradona - ngwakọ dị iche iche. Ripens ke ufọt ufọt September. Ụyọkọ nke ọdịdị conical nke ruru ihe ruru 2 kilogram. Osisi bụ oval, ụtọ. Kwesịrị ekwesị maka nchekwa oyi. Na-eguzogide ọrịa, ọgwụ na-eguzogide oyi.
Blackberries, ịkụ ihe na ilekọta osisi a ga-ewetara gị ọṅụ dị ukwuu.
Iche iche nke goozberị iche: //rusfermer.net/sad/yagodnyj-sad/posadka-yagod/kryzhovnik-kak-pravilno-vysazhivat-uhazhivat-i-lechit.html
Na-emepụta pink - Old Austrian wine dịgasị iche iche. Ụyọkọ ahụ bụ obere, nke gụnyere usoro mkpụrụ-acha mkpụrụ nke ìhè pink. Nwere ike ịdabere na mmiri mmiri.
Gurzuf pink - ọkwa klas oge niile. Mass bunches -700 gr. Berries na nnukwu okirikiri akpụkpọ na ike muscat okpukpo. Ụdị dịgasị iche iche bụ ọgwụgwọ ọrịa.
Tayfi pink - ọkwa table. Ụyọkọ ụyọkọ dị kilo 700. Mkpụrụ osisi ahụ bụ nke na-acha uhie uhie na-ekpuchi ya.
N'ebe ndịda na-enye ezigbo mkpụrụ.
Pink piich - ọkwa na tebụl n'oge. Ụyọkọ na-atụle 1.5 n'arọ. Ụdị dịgasị iche iche a ma ama maka nsị anụ ya, ikike ya iji gbochie frosts nke elu ruo ogo 23, ọrịa adịghị emetụta ya.
Ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ vaịn dị iche iche maka ịṅụ mmanya, iji ihe ọhụrụ, nzube zuru ụwa ọnụ, na-aga n'ihu na-abawanye. Iche iche nke na-eto eto na mbara igwe nke nwere ike igbochi pests na ọrịa. Mkpụrụ vaịn kwesịrị ekwesị na-ewe ohere karịa n'ụwa.
Mkpụrụ ọgwụ Euphorbia Pallas: ngwa na uru bara uru
Ihe omimi ndị dị na epupụta nke geranium dị ize ndụ na otu esi kpochapụ ha?
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Kasị mma mkpụrụ vaịn